अर्जुन कार्की भन्छन् : ‘चौधरी परिवारकै प्रिय थियो’
अर्जुन कार्की भन्छन् : ‘चौधरी परिवारकै प्रिय थियो’ पूर्वसचिव पत्नीको दर्दनाक हत्या
आजको न्युज मंगलबार, २८ माघ २०७६
काठमाडौं । कुनै–कुनै हत्याका घटना सुन्नेलाई नै पीडादायी हुन्छन् । पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीकी पत्नी मुनाको सोमबार त्यस्तै निर्मम हत्या भएको छ । घटनामा घरायसी कामदार विजय चौधरी संलग्न रहेको सीसीटीभी फुटेजका आधारमा प्रहरी निचोडमा पुगेको छ ।
घटनास्थलमा खटिएका महाशाखाका प्रवक्ता एसपी मुकेश सिंहले मुनाको हत्या कामदार विजयले गराएको सीसीटीभीबाटै पुष्टि भएको बताए । ‘मुनाको हत्या विजयले गरेकामा दुईमत रहेन’, एसपी सिंहले भने, ‘तर, किन हत्या गर्‍यो भनेर हामी अनुसन्धानमै छौं ।’ मुना र विजयको शव पोस्टमार्टमका लागि प्रहरीले पाटन अस्पतालमा लगेको छ ।
म पशुपतिनाथको दर्शन गर्न बिहानै निस्किएको थिएँ । उनी (मुना कार्की) घरमै यताउता गर्न थालिन् । त्यसैले म मात्रै मन्दिर गएँ । तर, पशुपतिबाट फर्किंदासम्म यस्तो घटना भयो । म उता भगवान्को पूजा गर्न जाने, घरमा यस्तो नराम्रो घटना हुने ? यस्तरी मार्दा कति पीडा भयो होला ? कति चिच्याइन् होला ? कति दुख्यो होला ?
म घर आउँदा गेट बन्द थियो । बोलाएँ, बोलिनन् । गेट खोलेर भित्र छिरें । टेबलमा विजय (विजय चौधरी) पछारिएको थियो । भान्सामा छिरें । रगतमा लतपतिएको देखें । मैले केही सोच्न सकिनँ । प्रहरीलाई सम्झें, फोन गरेर बोलाएँ । पापीलाई सानैदेखि पालेर राखेको थिएँ । यस्तो घटना भयो । यस्तो आपत्ति आइलाग्यो, कसरी सम्हालिन सक्छु ? मुनाको हात बाँधिएको थियो । घाँटीमा डोरीले कसेर मारेजस्तो देखिन्छ । डाइनिङ हलमा भएको एउटा मेच भाँचिएको र प्लास्टिकको पिर्का टुक्राटुक्रा भएको देखें । त्यति गर्दासम्म उनले किन प्रतिकार गर्न सकिनन् ? अचम्म लागिरहेको छ ।
(पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीले आफन्तसँग गरेको कुराकानीमा आधारित आजकाे अन्नपूर्ण पाेस्टबाट)
प्रकाशित मिति: मंगलबार, २८ माघ २०७६